Na ireo firaisam-pirenena vahiny aza dia tsy mikely soroka mlikarakara sy manohana ny fifidianana izay ho karakaraintsika, koa maninona isika no manaiky ho rebirebena ami’nizay zavatra izay. Aleo ho tontosa antsakany sy an-davany ilay fifidianana fa io ihany no ho etiny ivoahana amin’ny olana.
Maro tokoa no maniry ny isian’ny fifidianana milamina. Tsara tokoa ny ezaka ataon’ny sasany mahakasika izany. Na dia eo aza ny mitady izany dia misy ihany koa ireo izay tsy mitsahatra mandoto sy manakana ny tsy isian’ny fifidianana.
MIkaondoha daholo ny rehetra mitady izay fomba rehetra hanampiana an’i Madagasikara hikarakarana ity fifidianan ity. Ny tanjona dia iray ihany dia ny hisian’ny fitonianan sy ny fifidianana heken’ny rehetra.
Hita @zao fa na ireo vondrona ivelan’ny firenena na ireo ato anatiny dia mifantoka tanteraka @ fifidianana@ novambra ary mikatsaka tanteraka ny hanatontosana izany ao anatin’ny filaminana sy ny fangaharaharana! Tokony ho faly isika satria tsy irery ny malagasy na dia ao anaty ady mafy aza fa mbola maro ireo vonona hanarina ny firenena.